नाम र राजधानीमा विलम्ब - Pradesh Today
Homeसम्पादकीयनाम र राजधानीमा विलम्ब
नाम र राजधानीमा विलम्ब
प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणमा विलम्ब हँुदै आएको छ । प्रदेश स्थापना भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्ममा पनि राजधानी र नामले स्थायीत्व पाउन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर चर्चा भए पनि टुङ्गिन भने सकेको छैन ।
प्रदेश स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको एकीन हुन नसक्दा प्रदेश पाँच अन्योलमै रहिरहेका चर्चा र ब्याख्या हुने गरेको छ ।
स्थायी राजधानी र नामको प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि नाम र स्थायी राजधानीका लागि सुझाव संकलन गर्न बनेको संसदीय विशेष समिति अन्तर्गतको उपसमितिहरुले नाम र स्थायी राजधानीको विषयको सुझाव र प्रतिवेदन समितिलाई बुझाए पनि त्यसले निर्णायक रुप लिन सकेको छैन ।
त्यसपछि झनै अहिले राजधानी बहस र चर्चा सुरु भएको छ । सुझाव लिनु प्रतिवेदन बुझाउनु र सुझाव अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । समितिले नागरिक र १२ जिल्लाकै सम्मानका लागि त्यो गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ ।
प्रशासनिक क्षेत्र सबैको पायक पर्ने स्थानमा भएमा मात्रै सबै प्रदेशबासीको त्यसप्रति अपनत्व सिर्जना हुन्छ । राजनीतिक पहुँच, हचुवाको भर र आफू अनुकूल नेतृत्वले निर्णय गर्न थालेपछि त्यसले राम्रो सन्देश त दिदैन त्यसले त्यस्तो नेतृत्वलाई नागरिकले स्वीकार्न पनि समस्या हुनसक्छ । विभिन्न जिल्लामा पुगेर सङ्कलन भएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको राजधानी उपयुक्त स्थानमा राख्नुपर्छ ।
यति त्यसकै लागि सुझाव र मत लिइएको हो भने । हैन भने औपचारिकता निभाउने कार्य मात्रै हो भन्दै नीतिअनुसार संसदको दुई तिहाई मतले आफू अनुकूल तोके अस्वभनीय नहोला ।
स्थायी राजधानी र नामको बारेमा सुझाव लिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर यसरी लिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा नागरिकस्तरमा शंका बढ्न दिनुहुँदैन ।
अर्काेतर्फ राजधानी र नाममा राजनीतिक पहुँच र राजनैतिक बेइमानी देखिनु हुँदैन । राजधानीकै सुझावमा झण्डै आधा नागरिकहरुले दाङमा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको सार्वजनिक भएको छ । भने केहिले रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्ला पनि रोजेका छन् । तर न्यायोचित र उपयुक्त स्थानलाई प्रदेश सरकारले राजधानीको रुपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
नागरिकमा संघीयताको महत्व बुझाउने गरी राजधानी र नाम राखिनुपर्छ । संघीयता जनताको सुविधा र सहजताका लागि स्थापना गरिएको व्यवस्था हो । प्रदेशको राजधानी पनि त्यहि व्यवस्था र मान्यतामा आधारमा तोकिनु बुद्धिमता हो ।
नारा संघीयताको तर सेवा सुविधा र प्रशासनिक केन्द्र अर्थात् मुख्यालय एक कुनामा लगेर राख्नुले न्याय दिदैन । त्यसले बढी अन्याय सिर्जना गर्छ । यस्तै भए प्रदेशकै खिलापमा अप्रिय निर्णय नहोला पनि भन्न सकिदैन ।